Some Civic Society Leaders Welcome Dr. Nkosana Moyo's Presidential Bid
Dr. Nkosana Moyo.
Some members of civic society organisations and politicians in Bulawayo say they welcome Dr. Nkosana Moyo’s presidential aspirations, saying his candidature will provide Zimbabweans with more options of presidential candidates.
They told VOA Studio 7 in Bulawayo after holding a meeting with the former minister of Industry and International Trade that Dr. Moyo appears to have fresh ideas of reviving Zimbabwe’s economy and bringing sanity to the declining standard of living in a nation once regarded as the jewel of southern Africa.
Moses Mzila Ndlovu, leader of the Alliance for National Salvation, said he was happy about Dr. Moyo’s thrust to transform Zimbabwe, adding that he will find a way of working with members of the Alliance for the People’s Agenda, which is Moyo’s campaign tool for the 2018 presidential election.
Several representatives of various non-governmental organizations said Dr. Moyo is bringing up a lot of issues that may encourage a large number of people to vote in the 2018 general elections with the hope of bringing socio-economic and political transformation in Zimbabwe.
They noted that Dr. Moyo has a democratic right to seek the top office in Zimbabwe and his entry into politics appears to be motivating many people to vote in the council, parliamentary, senatorial and presidential election.
The former Zimbabwean cabinet minister resigned his post under protest in 2001 and left for South Africa after claiming that he was unable to work under Mr. Mugabe, saying the ruling party lacked vision and trust of the electorate.